जापानमा बाली जोगाउने जिम्मा ब्वाँसोलाई! :: PahiloPost
जापानमा बाली जोगाउने जिम्मा ब्वाँसोलाई!
गएको आठ महिना यता जापानको किसारजु सहर नजिकैको फार्ममा डेरा जमाएर बसेको छ एउटा डरलाग्दो रोबर्ड ब्वाँसो। नडराउनुस्, यसले नजिकै बसोबास गर्नेलाई तर्साउँदैन तर हेर्दा तर्साइहाल्छ कि भन्ने त पर्छ नै। यसको आधिकारिक नाम 'सुपर मोनर्स्टर उल्फ' हो जसलाई इन्जिनियरहरुले किसानले लगाएका बाली नास पार्ने जनावरलाई रोक्न तयार पारेका हुन्।
जापानको यो ठाउँमा ब्वाँसोको कथा भने दुखद् छ। सन् १८०० को सुरुमा नै ब्वाँसोहरु निमिट्यान्न भएका थिए। कारण के थियो? सरकारले नै ब्वाँसो समाप्त पार्ने प्रोजेक्ट चलाएको यो। त्यही क्याम्पेनिङका कारण ब्वाँसोको अस्तित्व सकियो। अहिले जापानका धेरै ठाउँमा हरिण र बँदेलको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। यी दुवै जनावर किसानले लगाएको बाली रुचाउँछन्। उनको रुची किसानका लागि प्रितकर विषय होइन। २ सय वर्ष पहिले समाप्त पारिएका ब्वाँसोलाई अब मानव सिर्जित ब्वाँसोका रुपमा रोबर्टबाट पुनर्जिवित पारिएको छ।
यहाँ केही रोचक कुरा छन्। रोबर्ट ब्वाँसको परीक्षण गर्दा सफलता मिलेको छ। सफलतासँग अर्को महिनादेखि रोबर्ट ब्वाँसोको उत्पादन ह्वात्तै बढाउन लागिएको असाही टेलिभिजनले जनाएको छ।
तयार गरिएका ब्वाँसोहरु १ किलोमिर वृत्ताकारमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्छन्। विद्युतीय तारबार वा अरु उपायभन्दा यो सजिलो प्रविधि भएको छ। ब्वाँसो देखेपछि बाली मास्न आउने जनावर छिर्न पनि सक्दैनन्।
यो ब्वाँसो २ फिट २ इन्च लम्बाइको छ जुन वास्तविक ब्वाँसोकै आकारको हो। सोलारबाट रिचार्ज गर्न सकिने ब्याट्री यसमा राखिएको छ। यसमा रहेको इन्फारेड रे सेन्सरले कोही आउँदैछ भने पत्ता लगाउँछ।
बीबीसीका अनुसार जब यो ब्वाँसोले कोही नजिकै रहेको चाल पाउँछ यसले डरलाग्दो आवाज निकाल्छ सँगै बन्दुक चलेको आवाज पनि। सँगै मानिसको बोली पनि ताकि जनावर आत्तिएर भागुन्। केही गरी यसबारे कुनै जानकारी नपाएको मानिस खेत/बारीमा पुग्यो भन्ने नमज्जासँग झुक्किनेमात्र होइन, डराएरै भाग्नेछ।
जापानमा बाली जोगाउने जिम्मा ब्वाँसोलाई! को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।